Izinzuzo Zama-imeyili Aqokiwe | Martech Zone
NgoLwesithathu, Novemba 20, 2013 NgoLwesithathu, Novemba 20, 2013 Douglas Karr
Ama-imeyili asetshenziselwa ukumaketha i-Push futhi angumyalezo owodwa kuya kwabaningi. Ngaphakathi kwemboni, lokhu kuyaziwa ngokuthi i-batch nokuqhuma. Isikhathi sikumthumeli. I-imeyili ebangelwe iyahluka, kuhlanganiswa isifanekiso sangokwezifiso nedatha yomsebenzisi ukuthumela umlayezo we-imeyili lapho kwenzeka umcimbi othile. Umcimbi okubangela i-imeyili. Ama-imeyili aqalisiwe athunyelwa ngqo ngohlelo lwe-backend noma ngokusebenzisa umhlinzeki wesevisi ye-imeyili ngokujwayelekile nge- API ukuhlanganiswa.
Ezinye izinhlelo zokumaketha ezenzekelayo njengeklayenti lethu, Ngakwesokudla ku-Interactive, nikeza ngamathuba wokuqamba ukulandelana kwemiyalezo ebangelwe ukuholela abantu emuva kusayithi lakho. Ngenkathi imikhankaso yemilayezo ebangelwa imvamisa yenziwe ngezifiso kakhulu futhi iyinkimbinkimbi, izinzuzo zinkulu impela. Njengoba zivame ukwenzeka ngenxa yomcimbi - zingathunyelwa ngesikhathi sokukhomba nokunemba ukufinyelela kumuntu ngesikhathi esifanele, ngomyalezo ofanele, ngesikhathi esifanele. Lokhu kusho ukuthuthuka kwamazinga okuguqulwa kanye nokuhlangenwe nakho okuthuthukisiwe kwamakhasimende.
Ama-Monks e-imeyili aqhamuka nefayela le- i-infographic ethakazelisayo kuma-imeyili aqalisiwe. Bangabantu abakhulu - basisiza nje ukuthi sakhe amathempulethi amahle, aphendulayo CircuPress. Chofoza ku-Infographic ukubona i-infographic ephelele, exhumanayo!
Tags: i-imeyili ezenzakalelayoi-imeyili apiukuguqulwa kwe-imeyiliophendula nge-imeyilikubangele i-imeyili